गुणस्तरहीन सिमेन्ट बेच्न परिवारका सदस्यलाई उत्पादन तथा वितरण प्रमुखको जिम्मेवारी ! – Aarthik Dainik
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ गुणस्तरहीन सिमेन्ट बेच्न परिवारका सदस्यलाई उत्पादन तथा वितरण प्रमुखको जिम्मेवारी !
गुणस्तरहीन सिमेन्ट बेच्न परिवारका सदस्यलाई उत्पादन तथा वितरण प्रमुखको जिम्मेवारी !
शंकर लुइँटेल २०७८, माघ २६ १०:४०
विराटनगर । सप्तकोशी सिमेन्टका मुख्य सञ्चालक रहेका भैरहवाका उद्योगी सुरेन्द्र गोयलले गुणस्तरहीन सिमेन्टको उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा सहजताको लागि परिवारका सदस्यलाई नै उत्पादन तथा वितरण प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका छन् । यसअघि उद्योगको उत्पादन तथा वितरणको मुख्य जिम्मेवारी गोयलले भान्जा आसिस जाटियालाई दिएको थिए । सञ्चालक सुरेन्द्र गोयलले अहिले भान्जा जाटियालाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर आफ्नै छोरा आसिस गोयललाई जिम्मेवारी दिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार जाटियाले गुणस्तरहीन सिमेन्टको बिक्रीवितरणमा रोक लगाएपछि सञ्चालक गोयलले उनलाई नै कम्पनीबाट बर्खास्त गरिदिएका हुन् । सप्तकोशी सिमेन्टले गुणस्तरहीन सिमेन्टको खुलेआम दोहोरो बिलबीजक समेतको प्रयोग गरी बिक्रीवितरण गर्दै आइरहेको छ । लामो समयदेखि कम्पनीको उत्पादन र बिक्रीवितरण हेर्दै आएका जाटियालाई उद्योगको पदीय जिम्मेवारीबाट हटाएर उनले आफ्नै छोरा गोयललाई जिम्मेवारी दिएपछि राजस्व छली प्रकरण र गुणस्तरहीन उत्पादनको बहसले थप चर्चा चुलिएको छ । जाटियाले पनि सिमेन्टको प्याकिङदेखि बिक्रीवितरणमा राजस्व छली गर्न गोयललाई सहयोग गरेकै थिए । तर उक्त प्रकरण बाहिरिएपछि जाटियाले केही समय उक्त कार्य रोक्न गोयलसँग आग्रह गरेका थिए । तर गोयलले गुणस्तर विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभाग दुवैतिर सेटिङ मिलाएको भन्दै अवैध धन्दालाई सञ्चालन गर्न जाटियालाई दबाब दिएका थिए । जाटियाले गोयलको कुरा नमानेपछि गोयलले आफ्नै छोरोलाई उक्त कार्यको जिम्मेवारी दिएका हुन् । मुख्य सञ्चालक गोयल हरेक तीन महिनामा भैरहवाबाट विराटनगर आएर दिनेगरेको निर्देशनअनुसार नै उद्योगले आफ्नो उत्पादन बिक्रीवितरण गर्ने गरेको छ ।
शप्तकोशी सिमेन्टले सुनसरी मोरङ र झापा जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण बजारमा आफ्नो वर्चस्व कायम गरेको छ । अधिकांश ग्रामीण सहरमा बिक्रीका लागि पठाइएको सप्तकोशी सिमेन्टको बिलिङ प्रणाली नै नभएको र पछि कम्पनीले ग्रामीण क्षेत्रमा बजार विस्तार गरेको हो । ग्रामीण क्षेत्रमा सिमेन्टको बजार विस्तार गर्दा राजस्व छलीमा पनि सहजता हुने भएपछि कम्पनीले त्यसतर्फ अग्रसर भएको स्रोतको दाबी छ । सिमेन्ट कम्पनी र सञ्चालकले यति ठूलो मात्रामा राजस्व छली गर्दै गर्दा समेत सरकारको नियमनकारी निकाय मौन बसेको छ । उपभोक्ताले दिएको उजुरीको समेत गुणस्तर विभागले हालसम्म छानबिन गरेको छैन । स्रोतका अनुसार उद्योग सञ्चालक गोयलले मोरङका सहरमा सिमेन्ट पठाउँदा एउटा बिलबीजक प्रयोग गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन बिक्रीका लागि अर्को बीजक पठाउने गरेका छन् । सप्तकोशी सिमेन्टका विषयमा लागेका आरोपको सत्यतथ्य बुझ्न सञ्चालक गोयलसँग पटक–पटक सम्पर्क राख्दा समेत उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।